3BB .Wi-Fi စက်အသစ်တွေမှာ နာမည် နဲ့ Password ပြောင်းမရသူများအတွက် (အသစ်)ပြောင်းနည်း - Software Guide
Home / Wi-Fiကိုနာမည်နဲ့Passwordပြောင်းနည်း / 3BB .Wi-Fi စက်အသစ်တွေမှာ နာမည် နဲ့ Password ပြောင်းမရသူများအတွက် (အသစ်)ပြောင်းနည်း
3BB .Wi-Fi စက်အသစ်တွေမှာ နာမည် နဲ့ Password ပြောင်းမရသူများအတွက် (အသစ်)ပြောင်းနည်း Reviewed by Ko Lin on 1:45:00 PM Rating: 5
3BB .Wi-Fi စက်အသစ်တွေမှာ နာမည် နဲ့ Password ပြောင်းမရသူများအတွက် (အသစ်)ပြောင်းနည်း
Ko Lin 1:45:00 PM Wi-Fiကိုနာမည်နဲ့Passwordပြောင်းနည်း
မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကြောင့် အကိုရေ လုပ်ပါဦး ။ 3BB .Wi-Fi စက်တွေမှာ Name နဲ့ Password ပြောင်းနည်းက အကို တင်ထားတာနဲ့ မတူဘူး ဘယ်လို့ လုပ်ရမလည်း အကိုရေ ...တဲ့
ဟုတ်ပါတယ် နောက်ထပ် 3BB က စက်အသစ်တွေပေးသုံးလာပါတယ်။ Wi-Fi စက်အသစ်တွေမှာ Name နဲ့ Password ပြောင်းရတာကလည်း အရင်စက်အဟောင်းနဲ့ လုံးဝမတူတော့ပါ။ ကျနော် သူငယ်ချင်း စက်အသစ်ကို ပြောင်းခိုင်းတော့ ကိုယ့်တိုင်လည်း လုပ်မတတ်လို့ 3BB ရုံးကိုသွားပြီး သွားမေးဖြစ်ပြီ အဆင်ပြေတာနဲ့  ဒီပို့လေးကို တင်ပေးလိုက်ရတာပါ။
အဟောင်းစက်တွေကတော့ အရင် တင်ထားတဲ့ 3BB .Wi-Fi ကို Name နဲ့ Password ပြောင်းနည်း အတိုင်းပါ ရပါတယ်။ မေးထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရော့ ခုနောက်ပိုင်း စက်အသစ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ ထိုင်းရောက်လူငယ်များအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.......
ခုနောက်ပိုင်း စက်သစ်တွေမှာ သတိထားရမယ့်အချက်လေးပါ မိမိစက်ရဲ့ နောက်ကျိုးမှာ ပုံမှာအတိုင်း အဲ့ဒီမှာ MAC: ဆိုတဲ့ အတန်းလေးမှာပေါ့ နောက်ဆုံးက ဂဏန်း ၄ လုံးကို Password မှာ ထည့်ပေးရပါမယ် စက်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ကျနော် ပြုလုပ်နေတဲ့ စက်မှာက 08ED ပါ ။ မှတ်ထားပြီး ။
အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြ ထားပါတယ်.မပြောင်းတတ်သေးရင် လေ့လာသွားနိုင်ပါတယ်။
Wi-Fi ကို Name နဲ့ Password ကို ပြောင်းဖို့အတွက် စက်နဲ့ တစ်ခါတည်း ချိတ်ထားပေးပါ။
Wi-Fi နဲ့ တွဲပြီး လုပ်မရပါဘူး။ပြီးရင် စက်နဲ့ ချိတ်ထားပြီးဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်ကို Copy ကူပြီး Browser တစ်ခုမှာ Peste လုပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
မည်သည့် Browserနဲ့ မဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ EBrowserနဲ့ ဆို ပို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
စက်အဟောင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဘောက်လေး ကျလာပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဖြည့်နည်းကို အောက်မှာ ကျနော် အောက်ပုံမှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
ဒီနေမှာ ဖြည့်စွက်မှာက အရေးကြီးလို့ ပုံမှာရော ပူတွဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Name- admin ထည့်ပါ -
Password- မှာကပြုလုပ်မယ့်စက် နောက်ကျိုးက MAC: အဆုံးဂဏန်း ၄ လုံးကိုထည့်ပေးရပါမယ်။
အခု ပြုလုပ်တဲ့ စက်မှာက 08ED ပါ အဲ့ဒီကုတ်ကို အခု ထည့်ထားပါတယ်။
Vaidate Code: မှာ ကျလာတဲ့ ကုတ်ကို အသေးအကြီး မှန်အောင် ရိုက်ထည့်ပါ။
အားလုံးထည့်ပြီးရင်တော့ Login နဲ့ ဝင်သွားပါ ။ အဆင်ပြေပါတယ်။
ပြီးရင် Basic တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Basic အောက်မှာ WLAN ကို ပြန်နှိပ်ပေးပါ.
WLAN ကို ရောက်ရင်. SSID: ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ Wi-Fi နာမည်ပါ ။
အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ ( အသစ် ) ကိုယ့်နှစ်သက်ရာ နာမည်တစ်ခု တည်းပေးပါ ။
နာမည် ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင် အပေါ်မှာ Vaidate Code: ကိုသွားပြီ ကုတ် ပြန်ဖြည့်ပေးပါ။
အားလုံး ဖြည့်ပြီးမှပဲ အောက်ဆုံးက Submit ပြန်ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အတည်ပြုချက် Browser မှာအောက်အစိမ်းရောင်လေး ဆုံးသွားအောင် ခဏစောင့်နေလိုက်ပါ ဒါဆိုတော့ Wi-Fi နာမည် ပြောင်းလို့ ပြီးသွားပါပြီ။ အောက်မှာ Password ပြောင်နည်းပါ ဆက်လက် လေ့လာပါဦး
Basic ရဲ့ WLAN မှာပဲ WPA Pre-Shared Kye; နေရာမှာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ Wifi Password ပါ။
အဲ့ဒီနေရာမှာ အသစ်Password အစားထိုးပေးရပါမယ် ။ Wifi Password မတွေ့ရပါဘူး ။ ကိုယ့်ထည့်မယ့် Wifi Password ကို New Text တစ်ခုမှာ မှတ်ထားပြီး မှတ်ထားတဲ့ ဂဏန်းကို Copy ကူပြီး WPA Pre-Shared Kye; နေရာမှာPeste လုပ်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ ။ Password ကို ၈လုံထက်အောက် ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ပို့ သေချာအောင်လို့ပါ။
ပြီးရင်တော့ Vaidate Code: ဆီကိုသွားပြီး ကုတ် ပြန်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။
အောက်ဆုံးက Submit ကို ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အတည်ပြုချက် Browser မှာအောက်အစိမ်းရောင်လေး ဆုံးသွားအောင် ခဏစောင့်နေလိုက်ပါ ဒါဆို Password အသစ်လေး နဲ့ အဆင်ပြေပြီးပေါ့။
ဒါက အခု လုပ်လာတဲ့ Wi-Fi နာမည် နဲ့ သုံးနေတာပါ ။ အားလုံး အဆင်ပြေကြလိမ်မယ့်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဆင် မပြေပါက အောက်မှာ ပြောခဲ့ပါ။
3BB .Wi-Fi ကို Name နဲ့ Password (အဟောင်းစက်)ပြောင်းနည်း
TrueMovie (ခေါ်) D-Link Wi-Fi ကို Name နဲ့ Password ပြောင်းနည်း